Sidee si aad u hesho Certification Zend PHP – Taylor Lopes ツ Blog
Fikradda ma aha in ay ka hadlaan faa'idooyinka (ama ma) isagoo shahaado a. Waxaan rabaa in aan wadaagno aan waayo-aragnimo, taas oo kaa caawin kartaa dad kale oo ku jira safar this.
Waxaa laga yaabaa inaad qabto 10 sano barnaamijyada, laakiin haddii aan si toos ah Exam waxbarasho, Waxaa aad u badan tahay ma idlaan. In iga ra'yi, Zend waxba kama gelin (sidaas darteed) haddii aad ogtahay sida barnaamijka; rabo in la ogaado haddii aad taqaan Gudigga luqadda PHP ah. ma aha kuwo Rumayn?
Markaas arki noocan oo kale ah su'aal:
# Waa maxay wax soo saarka ee code soo socda?
# Waa maxay wax soo saarka ee code soo socda? echo '1' . (ku qor '2') + 3;
Oo weliba saasoo:
# Waa maxay natiijada howlgalka socda bitwise in PHP?
# Waa maxay natiijada howlgalka socda bitwise in PHP? echo 1 ^ 2;
Ugu dambeyntii, this kale:
# Waxaad soo socda script PHP. Muxuu noqon doonaa wax soo saarka?
echo 0x33, 'Shimbiraha fadhiistaan ​​", 022, 'Geedaha.';
# Waxaad soo socda script PHP. Muxuu noqon doonaa wax soo saarka? echo 0x33, 'Shimbiraha fadhiistaan ​​", 022, 'Geedaha.';
Waxa uu hadda waxaa ka dhaadhacsan? Jawaab-celinta waa, siday u kala horreeyaan, “214”, “3” e “51 Shimbiraha fadhiistaan 18 geedaha”. Haddii aad tahay barnaamijyada wanaagsan oo dhan seegay, ha ka quusanina :'(
No isticmaalka duullaankii leh “qofna waxa uu u adeegsanayaa ku saabsan horumarinta maalinle ah“. Haddii aad rabto in aad noqon ZCPE a, ahaan lagu daabacay, diiradda saaraan waxa Zend aad u baahan doontaa, iyo dhibic!
Gudubto imtixaanka waa mid aad u wanaagsan, laakiin xataa si fiican yahay waxa ka baratay cilmiga ah. ka dibna, raaxaysan la joogo! Qof kasta oo arkay filimka “Power Beyond Life” Waad og waxa aan ula jeedo: “Happiness waa safar oo aan caga“.
Golaha + muhiim ah
Haddii aan ku soo koobo this post oo ku siin mid ka mid ah talo kaliya, Shallaytadaydee: dhigi Yururb. Laakiin qaar badan oo la mid ah sameeyo!!
Sida iska cad qof kasta wuxuu leeyahay hab iyaga u gaar ah si ay u bartaan oo ay bartaan, ma jiraan wax formula diyaar. Me xaq u siiyey soo socda:
buugaag & ilo
– Zend PHP 5 Certification Study Guide: php a[dhise] guide, by Davey Shafik et al. (English)
– Zend Certified shahaado PHP Engineer Descomplicando, Matheus Marabesi iyo Michael Douglas (Português)
(Waxaan helay dhowr qalad, laakiin waxa uu ahaa mid waxtar leh)
– Warqadaha Rasmiga ah PHP
Iibsashada iyo akhriyey labadan buugaagta. Ma reading dhamaystiran iyo dib u eegis. In ka heshiisyo ugu horeysay, tag muujinayo qodobada muhiimka ah qalinka; this fududeeyaa u eegista ka dib. Weydii su'aalo ku saabsan forums Official Site PHP iyo Internetka.
– Ku biir Group Rate shahaado PHP ah
– Metelay Taylor Lopes (aniga ii gaar ah waan soo dhigay Kediska)
– Yururb Exam-Shaybaarka
– Zend metelay Exam
– Android App metelay PHP zoe Practice Exam
(Waxaan helay dhowr qalad, laakiin waxa ay ka caawisaa)
dadka, akhristaan ​​buugaag waa weyn, waxaa adkaynayaa aqoonta, si kastaba ha ahaatee, ha Yururb waa dammaanadda guusha. Isticmaal wakhti kasta si xor ah u aadan Yururb, in uu yahay 1, 2 ama 5 su'aalo deg deg ah, laakiin tani waa waxa ay noqon doontaa farqiga u. Waadna xusuusan doontaan in maalinta aad tahay fool ka fool oo aad Test :D
Waad og tahay markii aad rabto in aad tijaabiso a code PHP ama REGEX iyo siinayaa in caajis kor u XAMP / WAMP ah? ka dibna, Waxaan qalab loo isticmaalo si ay u sameeyaan baaritaan deg deg ah oo loo hubiyo qaar ka mid ah jawaabaha su'aalaha. Si aad u ordi karaan codes PHP online, in qoraalkii kala duwan. aad u faa'iido badan!
imtixaanka Online code PHP
Tijaabi tibaaxaha joogto ah online (REGEX)
About ZCPE imtixaankii ugu
Waxaad hore u ogaadaan in caddaynta waa in English, Sidaa darteed, mid ka mid ah waa ugu yaraan leeyihiin waxgarasho farsamo si ay u qabtaan baaritaanka. awoodaan inay akhriyaan, ok ok!
Anigu tegi maayo galay faahfaahinta ku saabsan sida si aad u iibsato ama Exam jadwalka Voucher, maxaa yeelay waxa uu leeyahay badan oo wax ku saabsan internetka sharxaya, laakiin caarada waa sida soo socota:
– Si aad u iibsato Voucher ah
(Diiwaangeli iyo iibsan Voucher)
– Si Exam jadwalka
(Register iyo helitaanka link “Raadi xarunta imtixaanka a” in jadwal taariikhda imtixaanka)
Haddii aad xitaa ka fekeraan samaynaya imtixaanka, Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad maanta ka iibsan foojarka, haatan! Waxaa xusid mudan 1 sano iyo this idin siin doonaa a “jahannamada xoog” in ay bilaabaan waxbarashada, ka dib oo dhan, qofna doonayo in ay lumiyaan $195 maal-gashiga.
Waxaad mana jiri doonto weligeed 100% diyaar, laakiin trust, Waa waxba ka baxsan dunidan. waqti ku haboon in jadwalka imtixaanka waa marka aad si fiican u qabato ee Yururb. Iyo waxa uu doonaynin “si fiican u”? Waxaan dhihi lahaa ku saabsan garaacid 90% arrimaha.
Imtixaanka aad u baahan tahay si ay u hit 70% noqotay. Caddeynta leeyahay 70 su'aalo in la weydiiyo in 90 daqiiqo, in si kale loo dhigo, ku dhowaad 1m30s mar su'aal. siinayaa xasilloon, waxaan isticmaali 1 waqtiga, mar hore ka fiirsaneysa inay dib u eegis ku hor dhameystirka.
Maxay ku dhacday in tartanka? On bogga Zend ayaa warbixin ku saabsan mawduucyo eedeeyay Exam. Laakiin noo halkan, ma sudhay ku dul! su'aalo sahan waa in style ka mid ah Yururb. Sidaa darteed, si fiican u qabato ee Yururb, aad si fiican u Exam ¡Yo garantizo doono! Laakiin ma qurxin jawaabo, isku dayaan in ay bartaan oo ku ogaado sida ay si dhab ah lagu xaliyo su'aal kasta.
ugu dambeyntii, ka dib 8 bilood oo waxbarasho qaraabo ku salaysan waxa ku wargeliyay Post this, maanta (28/03/2017) oofiyo baaritaan iyo ZCPE, Ilaah ugu mahad naqayaa, waxaan ku qaatay! Waxa cad in aad wax dheeraad ah uga sooco karaa oo ka gooyay wakhtigaas qeybtii ama xataa ka yar, baxa gacantiisa.
Maalin ka hor imtixaanka
Haddii talo kale? Maalin ka hor wax daraasadda baaritaanka ma! Ma wax aad ku raaxaysato, daawato filim, Tuur ciyaar, socod fudud, chat saaxiibada, wax alla wixii! Tani waxay ka caawisaa aad joogtid maskaxda "fiican", iyada oo aan Xammuul. wax kale, ha cunin wax ka duwan sida caadiga ah, doono in waqtiga siinayaa burburo :'D aan xaq u?
Oo maalintaas D Baarista
No D-Day, karaa a 30 daqiiqo ka hor waqtiga jadwalka. kaliya waxaad u baahan tahay in ay qaataan laba saxiixa waraaqaha, mid ka mid ah la photo. Anna waxaan soo qaaday aqoonsiga iyo liisanka darawalnimada, wax kale! xataa Waxaad qaadan kartaa qalinka, gacanta, watch, buugaag, iwm, laakiin yimid codsiga xarunta imtixaanka, ma awoodi doontid inaad si ay u isticmaalaan wax kasta oo ka mid ah, wax walba waa la hayn doonaa ka mid ah qolka. Waxaad ka heli dhaweeyaha kaliya warqad qalinka iyo xoqid, shisheeya computer si Imtixaanka, cad.
In kiiskeyga, helitaanka halkaas, Aan saxiixay warqadaha iyo qolka socday. Anigu garan maayo hadii uu walwal ama kacsan, laakiin in ay ku riday dhegaha marinka ka, Waxaan bilaabay in ay maqlaan garaaca qalbigayga kkk :) bidix! Laakiin in koorsada ee imtixaanka waxaa lagu nasto, maxaa yeelay, waxaan ogaaday in inta badan waxa ay ahayd halkaas, Waxaan arkay in boqolaal ka mid ah Yururb oo uu sameeyey. E, dhamaadka, printou shaashadda ka damcay "Hambalyo".
In ay, nasiib wacan!
ID Musharaxa Client: ZEND029320
Total Furidda: 50202
28 March 2017 Taylor Lopes	php shahaado, imtixaanka, PHP, imtixaanka, zcpe, zend, zend shahaado injineer php
16 dib u eegista “Sidee si aad u hesho Certification Zend PHP”
Giovanni Portela ayaa sheegay in:
Hambalyo sharaf leh Saaxiib. Waan ogahay sida ay u badan shakhsi dadaal inaad maal waxa ku jira. aad u qalmaan.
28 March 2017 in 20:47
Thanks Portela, waad ku mahadsan tahay fahamka iyo samir :D hab!
28 March 2017 in 21:14
Antonio Junior A. Mota ayaa sheegay in:
Hambalyo, Taylor! Aad ayaan ugu faraxsanahay sida uu u hanashada. Waxaan arkay raadadka ay uga dhigayeen. Cool si ay ula wadaagaan waayo aragnimadooda iyo talooyin. Waxaad hubsan kartaa in igu buugii dadka adiga oo kale. shahaado Tani waxay aad u midho wanaagsan. hab weyn.
28 March 2017 in 22:55
OPA, sayidkiisa! Waxaan mahad erayada iyo ogahay in tixgelin waa laba geesood ah. Waxaa aad u fiican in qof uu isku joog shaqeeyaan. hab!
29 March 2017 in 7:21
Thiago Luís ayaa sheegay in:
Waxaan ahay en wadada si shahaado.
Waad ku mahadsan tahay diiwaangelinta waayo-aragnimo, wararka sida aad gargaar ku filan.
17 April 2017 in 20:45
Thiago nasiib wacan, Oo weliba, waxbarasho wanaagsan! Wax walba hagaagi doonaan, trust, kasbadeen…
18 April 2017 in 20:48
Edson Luiz da Silva Junior ayaa sheegay in:
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku mahadsantahay inaad post badan ayuu i caawiyay, maanta waxaan helay HAMBALYO filayaa. Yururb aad ku samaysay iyo ka tagay link, wuxuu ahaa mid i caawisay in aan diyaarinta. Hambalyo on your initiative, Aad ayaad u mahadsantahay!
22 June 2017 in 22:03
OPA, in sharci!! Hambalyo, Edson… Waan ku faraxsanahay inaan wax ka maqashaa, runtii waa guul aad u wanaagsan. hab!
22 June 2017 in 22:57
Vinicius Dias ayaa sheegay in:
jidka, Aad ayaad u mahadsantahay. uu Yururb, inta badan, Way i caawisay in aan ka heli shahaado!
Waxaan halkan aad qaadato si aad u codsato tip a… Sida aad u aragto in loo shahaado aad resume iyo / ama LinkedIn?
27 July 2017 in 16:15
OPA, ka dibna Vinicius, hambalyo!!
Waxaan ka ogahay xagga dadaal shakhsi waxa ay qaadataa in ay halkaas ka heli ;)
fiiri, ku saabsan soo bandhiga shahaadada kaliya this raacaan Talo LinkedIn.
Waad ku mahadsan tahay ra'yi-celin ah. in, hab!
27 July 2017 in 22:40
Carlos ayaa sheegay in:
Hambalyo isagoo gaari shahaado!
Mudo intee leeg ayay qaaday laga bilaabo waxbarashada by gudubto imtixaanka ?
Waxaad u malayn 3 bilood(waxbarashada 30 min 1 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii) Waxay ku filan si aad u hesho shahaado yihiin ?
8 January 2018 in 6:23
Waxaan mahad comment.
sida aan sheegay, cams qaar ka mid ah 8 bilood, laakiin waxa ay ku dhici kartay ka yar. Waa in uu doonayay si loo hubiyo in aan diyaar u lumin maalgashiga ahaa.
Haddii aad rabto in aad toobiye ah, dhigi Yururb (badan!!). Laakiin waxaan ku talin akhriska buugaagta aan soo sheegay, sida ugu wanaagsan ee shahaadada in ay tahay waxbarasho oo.
16 January 2018 in 21:10
Rander Carlos ayaa sheegay in:
ID Musharaxa Client: ZEND032378
2 June 2020 in 18:12
Que suas próximas aspirações também sejam em breve alcançadas. Oo weliba, excelentes!
19 July 2020 in 17:52
Thiago Bueno Fiorenza ayaa sheegay in:
Sidee baan u saaray sawir on my link bogga jaalaha ah?
23 April 2019 in 14:19
macluumaad Escolha My Account Zend
Go Information Personal
Guji zoe link
Hoos ilaa dhamaadka
Samee sawir ;)
9 June 2019 in 14:54
Copyright © 2021 taylorlopes.com tan Oct 2012, 3.043.881 helitaanka